Ahoana no hanatsarana ny valin'ny fikarohana voajanahary
Iray amin'ireo filàna fototra ilaina amin'ny famoronana paikady SEO mandresy ny fanatsarana ny laharan'ny fikarohana organik'i Google anao. Na eo aza ny tsy fetezan'ny Google ny algorithman'ny motera fikarohana azy ireo, misy fanao faran'izay lehibe hanombohana anao amin'ny fanatsarana azy, izay hahatonga anao ho tafiditra ao anatin'io Top 10 volamena eo amin'ny pejy voalohany io ary hahazoana antoka fa anisan'ireo zavatra hitan'ny mpanjifa mety voalohany ianao rehefa mampiasa ny fikarohana Google.
Farito ny lisitr'ireo teny lakile - Eritrereto ny fomba hikarohan'ny olona ny vokatrao sy serivisinao, anaovany lisitr'ireo ireto teny lakile ireto, ary zahao ny fifamoivoizana tombanana ho an'ny vanim-potoana tsirairay amin'ny fitaovana toa ny Google's Keyword Planner. Sintomy amin'ny lisitra avo lenta sy avo lenta indrindra ny lisitrao.
Handresy ny atiny tsara - Tadidio foana fa ny fanoratana maharesy lahatra, atiny avo lenta izay manintona ny fahalianana ary manery ny mpitsidika hizara azy io ary hampifandray azy io dia zava-dehibe. Ny votoaty tsara dia manana vintana tsara indrindra ho votoatin'ny viriosy, ary Google manome valisoa lehibe ny virosy amin'ny atiny ao amin'ny algorithm misy azy.
Mamorona pejy fehizoro - Raha manana pejy 10 mifandraika amina teny fanalahidy mitovy ianao, dia ho sahirana amin'ny famaritana ny pejy mifanaraka amin'izany i Google. Diniho kosa mampifangaro ny atiny ho lasa pejy fehizoro tokana. Miaraka amin'ny pejy iray fehizoro manam-pahefana amin'ny lohahevitra manokana, tsy misy fisafotofotoana SEO, ary tokony hanana laharana ambonimbony kokoa ianao.
Mampiasà teny fanalahidy sy fiovana amin'ny atiny pejy - Ny famoronana votoatin'ny pejy mifandraika no fomba tsara indrindra hahazoana laharana ambony, ary ampahany lehibe amin'ny famoronana votoaty ny fampiasanao teny lakile nokendrena. Aza averimberina matetika loatra ny teny fanalahidy amin'ny fandaniana ny fanoratana tsara, fa tokony averimberinao ao amin'ny atiny 2-3 ny teny lakile ho an'ny pejy fohy ary in-4-6 ho an'ny pejy lava kokoa. Ampidiro ireo teny lakile manan-danja amin'ny teny 50 voalohany, satria ny fametrahana mialoha dia mety ho famantarana ny maha-zava-dehibe azy.
Manatsara ny lohatenin'ny pejinao - Ny Ny tag HTML dia mamaritra ny anaram-pejin-tranonkala ary natao ho famaritana fohy ny atin'ny pejy. Heverin'i Google ho singa SEO manan-danja indrindra eto amin'ny pejy faharoa. Ataovy lohatenin'ny pejy litera ambanin'ny 70, miaraka amin'ny teny lakile manan-danja ao amin'ny lohateny, tsara kokoa amin'ny voalohany. Hevitra tsara ihany koa ny mampiditra ny anaran'ny orinasanao hatramin'ny farany.
Manorata famaritana meta maharesy lahatra - Ny Ny tag HTML dia natao ho fanazavana fohy momba ny atin'ny pejy web ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fahazoana tsindry avy amin'ireo mpampiasa. Tazomy ny famaritana meta ambany litera 150. Tokony ampidirinao ao amin'ny lahatsoratrao ihany koa ny teny lakile kendrena, satria ny teny rehetra mifanentana amin'ny fangatahan'ny fikarohana ataon'ny mpampiasa dia haseho amin'ny sahisahy.
Ampiasao ny fiovaovan'ny teny lakile ho toy ny vatofantsika mpampifandray anaty - Ampiasaina amin'ny famaritana lahatsoratra sy vatofantsika mifandraika amin'ny Google ny famaritana ny momba ilay pejy. Rehefa mampiasa rohy anatiny ianao dia tokony hampiasa lahatsoratra vatofants izay miovaova be ny teny fanalahidinao ho an'io pejy io, fa tsy andianteny toa kitiho eto or download here. Fa aza atao be loatra ny mampiasa teny lakile marina. Ny fampiasana fanovana akaiky dia hanampy anao hanana laharam-pahamehana ho an'ny teny fanalahidy bebe kokoa.
Aza adino ny momba ny tag ALT - Tags ALT dia singa HTML ampiasaina hanondroana lahatsoratra hafa azo aseho rehefa tsy azo adika ilay singa ampiharina (toy ny sary). Ny tag ALT dia mety manana fifandraisana matanjaka amin'ny filaharana Google SEO, ka rehefa manana sary sy singa hafa ao amin'ny pejin-tranonkalanao ianao dia aza hadino ny mampiasa tag ALT manazava miaraka amin'ny teny lakile kendrena ho an'io pejy io.
Zava-dehibe ny anaran'ny URL anao - Ny URL fohy kokoa dia toa mahomby kokoa amin'ny laharam-pikarohana Google noho ny lava kokoa, koa tadidio izany rehefa manangana ny tranokalanao ianao. Ataovy farafahakeliny farafahakeliny. Ianao koa tokony ampidiro amin'ny teny URL ny teny lakile, ary andramo apetraka eo akaikin'ny anaranao izy ireo. Rehefa manana teny fanalahidy marobe ao amin'ny URLo ianao dia zarao amin'ny hyphen.
Tsy misy satroka mainty - SEO satroka mainty dia manondro ny fanao fiezahana hamitahana ireo motera fikarohana hanomezana anao toerana ambony kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana tetika tsy etika, toy ny fividianana rohy. Na dia mankafy fisondrotana vetivety amin'ny filaharana aza ianao noho ny paikadin'ny satroka mainty dia mety ho vetivety ihany izany. Google dia nihatsara kokoa noho ny fahitana fika maloto ary na ho ela na ho haingana ny fandrosoana nataonao dia hofoanan'ny fanavaozana algorithm, na ny ratsy kokoa, ny tranokalanao dia hesorina tsy ho ao amin'ny index mihitsy.
Araho ny mpitsidika anao sy ny fitarihanao - Mba hanatsarana ny valin'ny SEO, zava-dehibe ny fandrefesana ny fiantraikan'ny ezaka ataonao amin'ny fivezivezena amin'ny tranokala sy ny fitarihana / fivarotana. Google Webmaster Tools dia afaka manome anao fahitana lehibe momba ny fomba fiasan'ny tranokalanao ary hamantatra ireo lesoka mety hamboarinao. ny Analytics fitaovana toy ny Analytics Universal an'ny Google dia manampy amin'ny fandrefesana ny fiovan'ny fivezivezena amin'ny fikarohana ary koa ny fanarahana ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny tranokalanao izay vokatry ny SEO. Fitaovana automatique marketing sy fitaovana fanaraha-maso miantso (toa Fanarahana ny antso an'ny DialogTech) afaka manampy anao hamatotra ny fitarihana sy ny varotra hiverina amin'ny SEO.
Mahazoa fiaraha-monina - Famantarana ara-tsosialy efa misy fiatraikany amin'ny laharana Google SEO ary manam-pahaizana momba ny indostria maro no mino fa hitombo izany. Raha mbola tsy nanao izany ianao dia diniho ny fananganana pejy media sosialy toa ny Google+ sy Facebook, ary manomboka mirotsaha amin'ny mpihaino anao.
Manana paikady fananganana rohy - Fampiasana rohy dia fehezan-teny mahasarika famoronana rohy ivelany vaovao mankany amin'ny tranonkalanao. Ankoatra ny famoronana votoaty mahafinaritra tian'ny olona hizarana, ny famahanam-bilaogy vahiny ary ny fangatahana webmaster amin'ny tranokala manan-kaja mifandraika amin'ny orinasanao mba hampifandray amin'ny pejinao dia fomba lehibe hananganana rohy. Raha azo atao, ampiasao teny lakile ny vatofantsika ho an'ny rohy anao, satria izany dia hanampy amin'ny fandefasana famantarana any amin'i Google fa misy ifandraisany amin'ireo teny ireo ny pejinao.
Ampiasao amin'ny tranokala namana - Nanambara i Google a algorithm fitaritana finday-friendly izay hisy fiatraikany lehibe amin'ny valin'ny fikarohana finday. Raha jerena fa eo amin'ny 50% ny karoka rehetra vita amin'ny Google dia eo amin'ny fitaovana finday, tonga ny fotoana hanatsarana ny findainao ary hiantohana ny laharanao tsy ho voany vokatr'izany.
Raha te hahalala fomba fanao tsara kokoa amin'ny fanatsarana ny laharam-pikarohana organika sy ny doka fikarohana Google SEO ary PPC, ity e-book ity dia afaka manampy, Marketer's Guide to Call Tracking for Google SEO and PPC.
Tags: alt tagsbacklinksmainty maintyatiny seoafa-po tsaramanatsara ny filaharanamanatsara seoanatiny mifandrayfamerimberenana teny lakilefikarohana siantifikafanovana teny lakileteny fanalahidyfamaritana metaOptimizationfanatsarana ny lohatenin'ny pejylohatenin'ny pejyseo atinysosialy sy seoslug url
Blair Symes dia mpitantana famoronana fangatahana ao DialogTech, ny mpitarika amin'ny lozisialy antso sy rindrambaiko mandeha ho azy. Nandritra izay 17 taona lasa izay dia namoaka lahatsoratra, taratasy fotsy, e-book, ary lahatsoratra bilaogy marobe tamin'ny lohahevitra marobe izy, anisan'izany ny varotra B2B, automatisation marketing ary marketing marketing.
21 aprily no finday an'ny Google! Ny lisitry ny lisitry ny SEO finday
Sokajy 5 metrika manan-danja tokony hofakafakainao
Apr 14, 2015 amin'ny 7: 16 AM
Tena tiako ny mandefa fisaorana betsaka amin'ny fizarana
Sep 20, 2015 amin'ny 1: 59 AM
Lahatsoratra tsara ary tena mikasa ny hijery ny fanatsarana ny fikarohana organikako aho.
Sep 20, 2015 amin'ny 2: 30 AM
Misaotra anao tamin'ny lisitra nataonao. Moa ve ny singa "mamorona pejy fehizoro" momba ny manampy teny lakile "canonical" sns amin'ireo metas?
Sep 20, 2015 ao amin'ny 9: PM PM
Tsia. Ny URL Canonical dia toerana anananao manana atiny duplicate 100% amin'ny tranokala, subdomain na domains ary tianao ny hifantohan'ny motera fikarohana amin'ny pejy iray fa tsy hampisaraka ny fahefana amin'izy rehetra. Ireo pejy fehizoro dia pejy misy lohahevitra. Ianao dia te-hanana antoka fa tsy hisaraka ny fahefanao amin'ny lohahevitra nomena eo amin'ny pejy. Aleo manana pejy kely kokoa izay feno amin'ny lohahevitra iray noho ny pejy maro izay manana verbiage sy fanazavana samihafa. Andramo manamboatra ambaratongam-pahefana ho an'ny tranokalanao ary manapaha hevitra ireo pejy manan-danja izay tadiavinao ao anatin'io ambaratongam-pahefana io… dia atsangano ireo pejy fehizoro ireo.
Jan 22, 2016 ao amin'ny 3: 33 AM
Misaotra nizara vaovao mahafinaritra momba ny perfomance fikarohana Organic
Mar 1, 2016 amin'ny 5: 17 AM
Misaotra ny lahatsoratra Lehibe miaraka amin'ny fampahalalana lehibe.
Mar 11, 2016 amin'ny 2: 14 AM
Tiako ny atiny bilaoginao mifandraika amin'ny toro-hevitra fikarohana ara-organika. Tena tsara izany
Mar 29, 2016 amin'ny 10: 34 AM
Lahatsoratra tsara! Manomboka mahatsikaritra aho fa ny fanatsarana ny atiny lavitra ny torolàlana "SEO" mahazatra ary ny fifantohana bebe kokoa amin'ny traikefan'ny mpampiasa / tranokala namana no mahatonga azy io ho lehibe. Zavatra iray hafa manamarika ny hafainganana! Miaina ny fiainantsika amin'ny lalana haingana ankehitriny isika, ka ny ampahany amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa dia azo raisina ho "Aza miandry Timmy kely". Ataovy izay hanatsarana ny atiny hahasarika ny sain'ny mpampiasa haingana.
Apr 14, 2016 amin'ny 6: 53 AM
heloo ity bilaogy ity dia knoledge tsara
Apr 30, 2016 amin'ny 6: 10 AM
bilaogy mahafinaritra. andramako ity ary ao amin'ny pejy voalohany Google ny tranokalako. misaotra nizara taminay…
May 6, 2016 amin'ny 8: 07 AM
Misaotra betsaka tamin'ny torohevitra. Hanomboka manavao ny tranokalako tsy tapaka aho. Fampahalalana fohy sy tsotra ary malefaka… Cool! Heveriko fa ny fandrefesana ny hetsika SEO dia zavatra tena zava-dehibe - mampiseho anao ny fomba mety izany. Izany no eo am-panaovana azy rehetra. Fanavaozana tanteraka ny SEO an'ny tranokalanay momba ny famolavolana tranonkala.
Heveriko fa hanampy ahy hanatsara ny SEO ao amin'ny bilaogiko ity fampahalalana ity. Tsotra ary amin'ny teboka. SEO = Votoatiny kalitao, KW mifaninana & realistika na andian-teny manan-danja, manatsara ny rohinao ary aza manoroka ny spam - ny lakilena tsotra ahazoana filaharana tsara. Ny fitazonana ny atiny ho vaovao dia tena fanalahidy. Ny fahatsiarovana ihany koa ny fahazoana rohy miditra ho an'ny pejy manokana sy lahatsoratra dia tena afaka manampy.
Mazava amiko fa ny SEO dia tsy vitan'ny mitondra vokatra fa manana taha ambony indrindra raha oharina amin'ny endrika marketing amin'ny Internet hafa. Tohizo ho avy ireo lahatsoratra mahafinaritra, ary hiverina foana aho! 🙂
May 17, 2016 ao amin'ny 9: 09 PM
torohevitra tsara, eo amin'ny sehatry ny dia aho izay mifaninana indrindra hahazoana fifamoivoizana biolojika tsara.
May 27, 2016 amin'ny 5: 16 AM
toa bilaogy ilaina tokoa, misaotra
14 Jul 2016 amin'ny 12:12 PM
Lahatsoratra tsara .Torohevitra mahasoa tokoa.
Misaotra ny fizarana.
Jul 28, 2016 amin'ny 4: 57 AM
Misaotra nizara vaovao mahafinaritra momba ny fahombiazan'ny fikarohana Organic.
Sep 21, 2016 ao amin'ny 4: PM PM
Lahatsoratra tsara ho an'ny fahombiazan'ny fikarohana organik'i Google ity lahatsoratra ity dia manampy ahy betsaka.
25 Nov 2016 tamin'ny 7:02 PM
Ity dia lahatsoratra tena tsara miaraka amin'ny fampahalalana mahasoa be dia be. Raha ny marina dia fantatro izao ny tsy fahampian'ny fahalalako amin'ny herin'ny teny lakile tsara sy ny famaritana meta. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila manatsara izany aho. Misaotra!
Dec 18, 2016 ao amin'ny 7: PM PM
Heveriko fa tato ho ato ny votoaty dia tsy afaka mitondra ny fifamoivoizana tsotra fotsiny aminao raha mamoaka tsy misy fepetra mety ianao. Misaotra ny atiny.
3 Jan 2017 amin'ny 1:16 PM
lahatsoratra tena manampy dia tena hanampy antsika…
Apr 16, 2017 amin'ny 4: 55 AM
ny fomba fampitomboana ny fifamoivoizana biolojika amin'ny tranokala. nataoko ny zavatra rehetra mba hampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala saingy tsy misy vokany. inona ny paikady tena izy hampitomboana ny fifamoivoizana biolojika ao amin'ny tranonkala
Apr 16, 2017 ao amin'ny 11: PM PM
Manomboka mahazo laharana biolojika ny tranokalanao araka ny SEMRush, fa mbola milevina ao anaty motera fikarohana ianao. Hanoro hevitra anao aho hifindra amin'ny CMS toy ny WordPress ary hamoaka lahatsoratra sarobidy mitohy, angamba infographic. Ary raha afaka mahazo lahatsoratra vahiny ao anatin'ny faritra misy anao ianao ahafahanao mampifandray amin'ny tranokalanao amin'ny bio mpanoratra anao dia azonao atao ny manafaingana ny fahefan'ny fikarohana.
May 15, 2017 amin'ny 6: 59 AM
Misaotra Andriamatoa Douglas Karr.
Apr 17, 2017 amin'ny 11: 11 AM
Tena manampy ahy ny soso-kevitrao. Ny SEO mifototra amin'ny atiny dia tena mahasoa amin'izao andro izao. Manao SEO ihany koa izahay ary manome lanja bebe kokoa amin'ny asako ny torohevitrao.
13 Jun 2017 amin'ny 5:13 AM
Tena fampianarana mahafinaritra! Misaotra nizara izany taminay.
Aug 1, 2017 amin'ny 10: 40 AM
ity misy fampahalalana marobe eto. Ianao sy ireo mpivaofy teny hafa dia mety efa nandrakotra ny zava-drehetra. Tokony ho ao an-tsaina ihany koa ny mpamaky fa ny metrikan'ny mpampiasa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana an'i Google hahatakatra raha toa ka mahavita ny adidin'ny pejy / antokony tsirairay ny mpampiasa. Midika mivantana izany ny fanamarinana ny sehatra Analytics ankafizinao sy ny fahatakarana ny fomba ampiasain'ny mpampiasa mifandraika amin'ny atiny tsirairay. Ny fahazoana an'io dia manome anao fahitana raha mahita na tsia ny atiny lehibe, fampahalalana ary / na fizarana ny mpampiasa.
Oct 29, 2017 amin'ny 9: 31 AM
Zavatra tena tsara !!
eny, tranokala sariaka finday, lohateny meta, famaritana meta, lohateny meta sns. dia ampiasaina tsara hahazoana fifamoivoizana sy laharana bebe kokoa. Ary koa, ny fanatsarana sary, fampiasana atiny mifandraika, fampitomboana ny fotoana lanin'ny tranokala dia tena ilaina tokoa hahazoana vokatra tsara kokoa. Misaotra anao nizara ireto torohevitra lehibe ireto. Fomba vaovao vitsivitsy no nianarako tamin'ny hafatrao.